Faayinaansii Daayispooraa irratti Xiyyeefatu - Oromia International Bank
Liqeefataan yeroon liqaa osoo hin xumuramin kaffalee yoo xumure kaffaltii dabalataa(Commitment fee) hin kaffalani.
Bittaa mana jireenyaa, bittaa Konkolaataa fi baasiin kaffaltii liqaa persenaalaa kaappitaalli diyaasbooraa alaa ol guddatee kan 20/80 seera isaa hordofee liqaa biizinesii fi investimentii ni laanna.
Ikiyuutii xiqqaa(kaffaltii dursaa), Yeroo liqaa deebisan, hawaasa diyaasbooraa sharafa biyya alaa(Doolaara,Yuuroo ykn Paawondii) kaffaluu danda’an fi maamiltoota biroof liqaa bittaa mana jireenyaa, bittaa konkolaataa, liqaa persenaalaa ni kennina.
Ikiyuutii xiqqaa(kaffaltii dursaa) 20% nama liqeefatu irraa kan eegamu yemmuu ta’u haftee 80% baankiin ni danda’a.fedhiifi galii keessan irratti hundaa’ee liqichi wagoota 25 keessatti kaffalamee xumurama.
Liqichi dhala xiqqaan kan kaffalamu ta’a.
Hawaasni diyaasbooraa ragaa galii isaanii kan ibsu,raga gaa’ela, waraqaa kaffalaa gibira haadha manaa/abbaa manaa(TIN), Kaardii keelloo fi kanneen biro dhiyeessuutu irraa eegama.
Diyaasbooraan Ikiyuutii xiqqaa(kaffaltii duraa) fi kaffaltii liqaa sharafa biyya alaa(Doolaara,Yuuroo ykn Paawondii) kaffaluu akka danda’u barreefamaan erga merkaneessee booda ragaalee wal qabatee erga dhiyeessee booda tajaajilli kun maatii diyaasbooraaf kennamu danda’a.